10/09/2021 - ALANZAYAR
မအိုင်းရင်းပွဲကြမ်းပြီ…. မအိုင်းရင်း ပွဲကြမ်းပြီး ဘာတွေပြောသွားခဲ့သလဲ နားထောင်သာကြည့်လိုက်တော့ဗျာ….. အပြည့်အစုံကို အောက်ကဗွီဒီယိုဖိုင်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို….. မအိုင်းရင်းပွဲကြမ်းပြီ မအိုင်းရင်း ပွဲကြမ်းပြီး ဘာတွေပြောသွားခဲ့သလဲ နားထောင်သာကြည့်လိုက်တော့ဗျာ….. အပြည့်အစုံကို အောက်ကဗွီဒီယိုဖိုင်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို….. မအိုင်းရင်းပွဲကြမ်းပြီ မအိုင်းရင်း ပွဲကြမ်းပြီး ဘာတွေပြောသွားခဲ့သလဲ နားထောင်သာကြည့်လိုက်တော့ဗျာ….. အပြည့်အစုံကို အောက်ကဗွီဒီယိုဖိုင်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို….. မအိုငျးရငျးပှဲကွမျးပွီ…. […]
မနက်ခင်းသတင်းထူးများ…. ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးအိမ်သို့ စစ်ကောင်စီက ဝင်ရောက်ရှာဖွေ… အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင်အား ဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို… မနက်ခင်းသတင်းထူးများ…. ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးအိမ်သို့ စစ်ကောင်စီက ဝင်ရောက်ရှာဖွေ… အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင်အား ဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို… မနက်ခင်းသတင်းထူးများ…. ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးအိမ်သို့ စစ်ကောင်စီက ဝင်ရောက်ရှာဖွေ… အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင်အား […]
အမေစုရဲ့ အိမ်အပြန်လမ်းကို ပန်းကိုင်ပြီးကြိုချင်ပေမယ့် ယခုချိန်မှာတော့ လက်နက်ကိုင်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့ ဘောလုံးသမား ဝင်းနိုင်စိုး
အမေစုရဲ့ အိမ်အပြန်လမ်းကို ပန်းကိုင်ပြီးကြိုချင်ပေမယ့် ယခုချိန်မှာတော့ လက်နက်ကိုင်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့ ဘောလုံးသမား ဝင်းနိုင်စိုး တစ်ချိန်က ရတနာပုံအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူးဖြစ်ပြီး ခြေစွမ်းကောင်းတွေကို ပြသထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဘောလုံးသမား ဝင်းနိုင်စိုးကတော့ အမှန်တရားဘက်ကနေ ရပ်တည်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ တတ်တတ်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဝင်းနိုင်စိုးကတော့ မိသားစုနဲ့အတူ လွတ်မြောက်နယ်မြေကို ရောက်ရှိနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
ပြည်သူအားလုံး အသိသတိ ကြီးကြီးနဲ့ ပါဝင်ဆင်နွှဲပေးကြဖို့ ပြောလာတဲ့ မော်ဒယ် ဝေယံအောင်
ပြည်သူအားလုံး အသိသတိ ကြီးကြီးနဲ့ ပါဝင်ဆင်နွှဲပေးကြဖို့ ပြောလာတဲ့ မော်ဒယ် ဝေယံအောင် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မော်ဒယ် boy ချောချောလေး မောင်ဝေယံအောင်ကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။ ကိုဝေယံအောင်ကတော့ တော်လှန်ရေးအတွက် လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ လေ့ကျင့်နေတဲ့ ရဲဘော်တစ်ဦးလည်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ မြို့ပြမှာရှိတဲ့ အနုပညာအလုပ်နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ပြီး ပြည်သူတွေအတွက် […]
ယူရှင်အိုကာမီဟာအောင်လစိန်မခေါ်သင့်ပါဘူးဟု One Championship ဥက္ကဌချန်ထရီကပြော
ယူရှင်အိုကာမီဟာအောင်လစိန်မခေါ်သင့်ပါဘူးဟု One Championship ဥက္ကဌချန်ထရီကပြော အောက်တွင် ဗွီဒီယိုဖိုင် ပါသည်။ အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်…..။ အောက်တွင် ဗွီဒီယိုဖိုင် ပါသည်။ အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်…..။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို အောက်တွင် ဗွီဒီယိုဖိုင် ပါသည်။ အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်…..။ အောက်တွင် ဗွီဒီယိုဖိုင် ပါသည်။ အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်…..။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို အောက်တွင် […]
ဆေးတက္ကသိုလ်မှ ဆရာဝန်ဘွဲ့ကို အတူတူရရှိအောင် ကြိုးစားကာ လူအများကို အံ့အားသင့်သွားအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည့် သားအမိနှစ်ဦး
ဆေးတက္ကသိုလ်မှ ဆရာဝန်ဘွဲ့ကို အတူတူရရှိအောင် ကြိုးစားကာ လူအများကို အံ့အားသင့်သွားအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည့် သားအမိနှစ်ဦး အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် Cynthia Kudjiဆိုသည့်မိခင်နှင့်သမီးဖြစ်သူ Jasmine Kudjiတို့ဟာ ဆေးတက္ကသိုလ်မှ ဆရာဘွဲ့ကို အတူတူရရှိအောင် ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူ Cynthia Kudjiဟာ ဂါနာနိုင်ငံသူဖြစ်ပြီး သူမဟာ ဆရာဝန်အလွန်ဖြစ်ချင်သည့် ဆန္ဒရှိနေခဲ့သည့်အတွက် အမေရိကန်သို့ ဆေးကျောင်းတက်ရန် […]
တောထဲတောင်ထဲမှာ သူမ ဘယ်လိုနေထိုင်နေရလဲ ဆိုတာ ကို ပြသလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး သရုပ်ဆော င်ဖွေးဖွေးကေ တာ့တော် လှန်ရေးကြီးမြှာ ပည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တ ရားဘ က်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့တ စ်သားတ ည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးလ မ်းထွက် ကာလူထုလှုပ် ရှားမှုတွေ မှာအားတက် သရောပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ လှုပ်ရှား မှုတွေမှာပါဝင် ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပု ဒ်မ၅၀ […]
အာဏာရူးတွေကြောင့် ခရုကောက်ပီးဝမ်းရေးဖြေရှင်းနေရတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်လေးရဲ့ ခံစားချက်…. မျက်ရည်ခိုင်မှ ကြည့်ကြပါ
အာဏာရူးတွေကြောင့် ခရုကောက်ပီးဝမ်းရေးဖြေရှင်းနေရတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်လေးရဲ့ ခံစားချက်…. မျက်ရည်ခိုင်မှ ကြည့်ကြပါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် 2020 ရွေးကောက်ပွဲပီးနောက် မဲမသာမှုရှိသည်ဟု အကြောင်းပြပြီး စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းယူခဲ့သည်။ အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်နှင့်အတူ အာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ လူထုလှုပ်ရှားမှုများ နိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်မှ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အပြစ်မဲ့အရပ်သားပြည်သူများစွာ သေဆုံးခဲ့ကြရပါသည်။ တပြိုင်တည်းမှာပင် 2019 ခုနှစ် တရုတ်နိုင်ငံမှ […]
ချစ်သူနဲ့အတူရိုက်ထားတဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ပေးလာတဲ့ မင်းသားချော ဟိန်းဝေယံ..
ချစ်သူနဲ့အတူရိုက်ထားတဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ပေးလာတဲ့ မင်းသားချော ဟိန်းဝေယံ.. အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ လျှောက်လှမ်းနေတဲ့မင်းသားချော ဟိန်းဝေယံကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိန်းဝေယံကတော့ မြန်မာဇာတ်လမ်းတွေမှာဆိုရင် ဟာသပိုင်းကိုလည်း ပိုင်နိုင်သလို ဒရမ်မာတွေကို ပိုင်နိုင်စွာသရုပ်ဆောင်တတ်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိန်းဝေယံက ဖေဖော်ဝါရီလထဲကနေ ပြည်သူတွေကို အလှူတွေလုပ်ရင်းနဲ့ ရပ်တည်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဖန်သူတစ်ချို့ကတော့ […]